Inona ny angovo azo avy amin'ny masoandro ary ny fomba fiasany | Fanavaozana maintso
Inona no ary manao ahoana ny fiasan'ny angovo azo avy amin'ny masoandro
Portillo Alemanina | | Angovo azo avy amin'ny masoandro
Rehefa miresaka momba ny angovo avy amin'ny masoandro isika, ny zavatra voalohany eritreretintsika dia ny panneaux solaires. Izany dia angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic, angamba no angovo malaza indrindra amin'ny angovo azo havaozina rehetra, miaraka amin'ny rivotra. Na izany aza, misy karazany iray hafa: angovo azo avy amin'ny masoandro.
Raha te hahafantatra ny zava-drehetra momba an'io karazana angovo avy amin'ny masoandro io ianao, manomboka amin'ny hoe inona ilay izy ary amin'ny alalàn'ny fampiasana azy, mamaky hatrany 🙂
1 Inona ny angovo azo avy amin'ny masoandro?
2 Ireo singa amin'ny fametrahana termal
2.5 Paompy mihodina
2.6 Hery fanampiny
3 Zavatra ilaina amin'ny fiarovana
3.1 Sambo fanitarana
3.2 Valve fiarovana
3.4 Milentika ny hafanana
3.6 Fanaraha-maso mandeha ho azy
Inona ny angovo azo avy amin'ny masoandro?
Azo antoka fa mieritreritra ianao fa ny ranon'ny renirano, farihy ary tahirin-drano dia iharan'ny taratra masoandro, na izany aza, tsy manafana izany. Ary ny hanararaotana an'ity taratra masoandro ity dia ilaina ny fametrahana manokana hanampiana ny hafanana ny tsiranoka hampiasaina any aoriana.
Ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia mandray anjara betsaka amin'ny fampihenana ny vidiny, amin'izay dia hitsitsy angovo ary hampihena ny famoahana entona CO2 izay miteraka fiakaran'ny maripana sy miteraka fiovan'ny toetr'andro.
Ireo singa amin'ny fametrahana termal
Raha vao fantatsika hoe inona ny angovo azo avy amin'ny masoandro, dia tsy maintsy manana ny singa ilaina hananganana fametrahana masoandro izay ahafahantsika manararaotra an'io loharanon-kery io.
Ny zavatra voalohany tokony hananana fametrahana an'io karazana io dia ny mpanangona na ny tontolon'ny masoandro. Ity panneaux solaires ity dia tsy mitovy asa amin'ny photovoltaic fantatra. Tsy manana sela fotovoltaika manangona fotona jiro hanovana azy ireo ho lasa angovo, fa kosa avelao izahay hisambotra taratra masoandro hanomboka hanafana ny tsiranoka mivezivezy ao anatiny. Misy karazana mpanangona isan-karazany ary misy fahasamihafana amin'ny zava-bitany.
Ny faharoa dia ny fizaran-tany. Ireo no fantsona mandrafitra ny fizaran-tany izay hitondrantsika ny tsiranoka famindrana hafanana izay hikarakara ny hetsika izay hataontsika. Matetika ny faritra dia mihidy amin'ny ankamaroan'ny fametrahana. Noho izany, misy resaka lalana iray, avy amin'ny tontonana, ary miverina boribory, hatramin'ny tabilao. Izany dia toy ny hoe ity faritra ity dia karazana vinaing-drano izay manampy amin'ny fanafanana toerana iray.
Izy ireo no miandraikitra ny fitaterana ny hafanana amin'ny alàlan'ny faritra. Ny mpampita hafanana dia mamindra ny angovo azon'ny masoandro mankany anaty rano. Matetika izy ireo dia ivelan'ny tanky (antsoina hoe mpivarotra takelaka) na anatiny (coil).
Satria tsy mitovy foana ny fangatahana angovo azo avy amin'ny masoandro, toy ny amin'ny photovoltaics dia mitaky izany rafitra fitehirizana angovo sasany. Amin'ity tranga ity, ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia voatahiry ao amin'ireo mpanangona. Ity mpiorina ity dia mahavita mitahiry rano mafana mba hananana azy io rehefa ilaintsika izany. Izy ireo dia tanky manana ny fahaiza-manao sy ny insulation ilaina mba hisorohana ny fahaverezan'ny angovo sy hitazomana ny rano amin'ny fotoana rehetra.
Mba hitondrana ny tsiranoka amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray hafa dia ilaina ny paompy izay mandresy ny rano mitete avy amin'ny boriborintany sy ny herin'ny fikorontanana ary ny hery misintona.
Rehefa tsy dia misy taratra masoandro dia mihena ny famokarana angovo io. Saingy tsy izany no antony mahatonga ny fangatahana koa. Manoloana ireo karazana toe-javatra izay mihoatra ny famatsiana ny fangatahana dia mila rafitra mpanohana manafana ny rano isika ary izany no izy tsy miankina amin'ny tontolon'ny masoandro. Io dia antsoina hoe mpamorona backup.
Izy io dia vinaingitra izay manomboka miasa amin'ny toe-javatra misy ny angovo azo avy amin'ny masoandro ka tsy manatsara kokoa ary manafana ny rano voatahiry.
Zavatra ilaina amin'ny fiarovana
Zava-dehibe ny fananana rafitra fiarovana mba hahazoana antoka fa ny fametrahana dia miasa amin'ny toe-javatra mety indrindra ary tsy hiharatsy rehefa mandeha ny fotoana. Ireo singa mamorona rafitra fiarovana dia:
Araka ny fantantsika, satria mampitombo ny mari-pana ny rano, dia toy izany koa ny habetsany. Noho io antony io dia ilaina ny singa iray izay afaka mandray an'io fitomboan'ny habeny io rehefa mihanaka ny tsiranoka famindrana hafanana. Ny sambo fanitarana dia ampiasaina amin'izany. Misy karazana solomaso maromaro: misokatra sy mihidy. Ny be mpampiasa indrindra dia ny mihidy.
Valve no ampiasaina amin'ny fifehezana tsindry. Rehefa tratra ny sandan'ny tsindry napetraka ao amin'ny fizotran'ny fanamafisam-peo, dia mamoaka rano ny valizy mba hisorohana ny tsindry tsy hahatratra fetra mety hampidi-doza.
Glycol dia tsiranoka mety hitondrana ny hafanan'ny fametahana hafanana avy amin'ny masoandro. Ny zavatra azo atoro indrindra dia hoe tsiranoka antifreeze, satria any amin'ireo faritra tena ambany dia ambany ny maripana, ny hatsiaka be amin'ny rano ao anaty faritra dia mety hanimba ny fametrahana azy rehetra. Ankoatr'izay, ny tsiranoka dia tsy maintsy tsy misy poizina, tsy mangotraka, tsy manimba, manana hafanana avo, tsy tokony ho very maina sy mandany vola. Raha tsy izany, tsy hahasoa ny angovo.
Ny idealy amin'ny fametrahana an'ity karazana ity dia ny fananana rano 60% sy glycol 40%.
Matetika amin'ny fotoana maro dia mafana be ny rano, ilaina ny manana heatsinks hisorohana ity fanafanana mampidi-doza ity. Misy heatsink sts, mpankafy sns.
Ireo vela-pandrika dia afaka mamoaka ny rivotra miangona ao anaty faribolana ary mety hiteraka izany olana lehibe eo amin'ny fiasan'ny fametrahana. Misaotra an'ireny purger ireny azo esorina ity rivotra ity.
Io no singa mahatonga ny zava-drehetra hiasa tsara, satria heveriny fa fanaraha-maso mandeha ho azy izay mandrefy ny mari-pana amin'ny takelaka, fiara mifono vy, fandaharana, fampidirana ny fantson'ny hafanana herinaratra (raha misy ity rafitra ity), programmer, fanaraha-maso paompy, sns.
Amin'ity fampahalalana ity dia azonao atao ny mianatra bebe kokoa momba ny angovo azo avy amin'ny masoandro sy ny fampiharana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo azo avy amin'ny masoandro » Inona no ary manao ahoana ny fiasan'ny angovo azo avy amin'ny masoandro
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny bioethanol